Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta Ntsay: Vaky barara ny zava-miafina teny amin’ny fitsarana
Tranga iray nahoraka tamin’ny alarobia teo ny hoe “noravain’ny Filankevi-panjakana ny didim-panjakana mandrafitra ny Governemanta Ntsay Christian”. Nanaitra ny mpanara-baovao maro ny nandre izay vaovao izay satria tsy re loatra ny fiandohan’ity raharaha ity.
Io didim-pitsarana navoakan’ny Filankevi-panjakana ny alarobia teo io dia nitsipaka ny fitakian’ny depiote ho amin’ny fanovana, niandrandra ny handravan’ny filankevi-panjakana ny didim-panjakana mampanangana ny governemanta Ntsay Christian. Nanaitra ny maro satria tsy re tsaika loatra ity raharaha ity ka ny didy nivoaka vao samy nihiratra ny mason’ny maro.
Raha ny fahita andavanandro dia didim-panjakana tsy azo angatahana fandravana eo anoloan’ny Filankevi-panjakana ny didim-panjakana manendry Praiminisitra sy manendry minisitra mandrafitra governemanta. Io didim-panjakana io no antsoin’ny mpahay lalàna hoe “acte de gouvernement”. Izany hoe tena zara-fahefana samirerin’ny filoham-panjakana ny mandray an’izay didim-panjakana izay.
Ny tamin’ity fanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny fanendrena an’ireo minisitra mandrafitra ny governemanta tarihiny kosa anefa dia tsy mitovy amin’izay didim-panjakana mahazatra amin’ny fandrafetana governemanta toa izany fa nialohavan’ny fanapahan’ny Fitsarana Avo momba ny lalampanorenana tamin’ny faha-25 may teo. Io fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana io dia mamatotra andraikitra ny filohampanjakana hanaja izay voafaritra ao. Tsy nohajain’ny filohampirenena Rajaonarimampianina ny foto-kevitra sy ny voafaritr’io fanapahan’ny Hcc tamin’ny faha-25 may io ka dia azo sokajiana ho toy ny “didim-panjakana tsotra” manana endrika toy ny antsoin’ny mpahay lalàna rehetra hoe “acte administratif” ny fanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny fandrafetana ny governemanta tarihiny. Tsy nohajain-dRajaonarimampianina fa nokononkononiny niaraka tamin’ireo sodokan’ny seza sy voninahitra ary tombontsoa manokana avy eny amin’ny Kianjan’ny 13 may.
Izay no nanosika ny solombavambahoaka ho amin’ny fanovana hitondra ny raharaha teny amin’ny Filankevi-panjakana satria azon’ny Filankevi-panjakana atao tsara ny mandrava ny didim-panjakana manana karazana toa izany fa tsy toa ilay didim-panjakana ambara matetika hoe “acte de gouvernement”.
Ny nahavariana dia ny famelabelarana sy karazana taky nataon’ny mpiaro ny lalàna (commissaire de la loi) teo amin’ity Filankevi-panjakana ity dia mirona tanteraka any amin’ny fanomezana rariny ny fitakian’ny solombavam-bahoaka ho amin’ny fanovana ny handravana an’io didim-panjakana nandrafetana ny governemanta Ntsay Christian io, saingy teo amin’ireo mpitsara mpamoaka didy notarihin-dRakotoson Henri no tsy nampahomby azy.
Taorian’ny fivoahan’ny fitsipahana (rejet) nataon’ny Filankevi-panjakana an’io fitakian’ny solombavambahoaka ho amin’ny fanovana io no nahenoana tamin’olona azo antoka, fa henjana dia henjana ny fampihorohoroan’i Mavoloha an’ireo mpitsara teo anivon’io Filankevi-panjakana io. Raha ny marina, hoy ny loharanom-baovao, dia nisy mpitsikilon’i Mavoloha, tao anatin’ny fianakaviamben’ny fitsarana izay niara-nikaondoha momba ity raharaha iray ity, ka nahatonga an’i Mavoloha ho nampihorohoro an’ireo mpitsara, ary nisy mpitsara niakatra tosi-dra mihitsy aza, ary nahiana ho tapaka lalan-dra, satria tena mihatra aman’aina ny fampihorohoroana niantefa taminy.
Tokony ho nandray didy “ordonnance” ny tompon’andraikitra voalohan’ny Filankevi-panjakana mba hanendry izay mpitsara hisahana mivantana ity Raharaha ity, hoy ny loharanom-baovao, saingy tsy namelan’i Mavoloha raha tsy voailika tamin’ny ora farany io olona tokony nandray ny toeran’ny filohan’ny fitsarana mpamoaka didy tamin’ity raharaha ity io. Tetsy ankilany, nifanindran-dalana tamin’io fampihorohoroana ny mpitsara natahoran’i Mavoloha io dia navesatra ny “malety” nenti-nanohy ny “kolikoly avo lenta” teny amin’ny Fitsarana, ary dia na nirona tamin’ny fanomezana rariny ny fitakian’ny solombavambahoaka mba handravana ny didim-panjakana mandrafitra ny governemanta Ntsay Christian aza ny mpiaro ny lalàna teo anivon’ny Filankevi-panjakana, dia saron’ny kolikoly avo lenta ny masom-panahin’ny sasany, ka tsy nampaninona ny mpitsara sasany ny nanome fahafaham-po an-dRajaonarimampianina.
Dia manara-maso ny ho fihetsiky ny minisitra vaovao misahana ny fitsarana ny maro satria io minisitra vaovao io dia malaza fa isan’ny tsy mikoso-maso amin’ny ady amin’ny kolikoly.